झापामा प्रहरीले प्रहरीलाई नै गरे यस्तो कडा कारबाही, प्रहरीमाथि रिस पोख्दा, पर्यो चर्काचर्की (भिडियो सहित) – PathivaraOnline
Home > भिडियो > झापामा प्रहरीले प्रहरीलाई नै गरे यस्तो कडा कारबाही, प्रहरीमाथि रिस पोख्दा, पर्यो चर्काचर्की (भिडियो सहित)
admin May 4, 2021 May 4, 2021 भिडियो, समाचार	0
दमक, झापा । कोरोना संक्रमितको संख्या बढ्दै गइरहेको समयमा नेपालमा आजदेखी विभिन्न ठाउँमा निषेधाज्ञा लागू भएको छ । विभिन्न मुख्य सहरमा प्राय नयाँ नियम लागू गरि सबैलाई रोगबाट जोगिन विभिन्न नीति नियम लागू हुँदै आइरहेका छन । झापामा आजदेखी नयाँ नियम लागू गरिएको छ । बिगत एक हप्तादेखि सूचना दिदै आइरहेको र आजबाट सडकमा प्रहरीले नयाँ नियमसंगै कडा कारबाही सुरु गरेको छ ।
झापाको दमक चोकमा एकाबिहानैदेखि प्रहरीले एक एक गाडी अटो सिटि मोटरसाइकल लगायत विभिन्न सवारी साधनको चेकजाच गरिएको छ । यसैक्रममा प्रहरीकै अगाडी एक मोटरसाइकलमा सवार ब्यक्तिले आफू पुर्ब प्रहरी भन्दै कडा रुपमा प्रस्तुत भएर डिउटीमा खटिएका प्रहरीलाई थर्काउन खोजेपछि प्रहरीले प्रहरीलाई नै यस्तो कडा कारबाही गरेका छन ।
भारतसँगको नाका काँकडभित्तासँग जोडिएको जिल्ला हाे झापा। भारतबाट कोरोना सहितका मानिसहरूकाे आवतजावत हुने खतराकै कारण पनि झापामा लकडाउन हुन जरूरी नै देखिन्छ । तै पनि झापा जिल्ला प्रसासनले जनहितको ध्यान राखेर यतिबेला जोर बिजोर प्रणालीमा यातायातका साधनहरू चलाउन अनुमति दिएकाे हाे ।
यसै त नेपालीहरू भनेका कहाँ टेर्छन र! जति नै सूचना र समाचार प्रकाशित गरेपनि कुनै न कुनै बहाना बनाएर नियम उल्लङ्घन गर्नेहरूको लर्को नै लाग् छ। यस्तैमा झापाको दमकमा पुर्ब प्रहरी भनिने ब्यक्ति र डिउटिमा खटिएका प्रहरीबिच चर्काचर्की नै परेको छ । भिडियो हेर्नुहोला छक्क पर्नुहुनेछ । तलको भिडियोमा हेर्नुहोला होस उड्नेछ ।
बेहालै भएछ नि! अनलाइन कक्षा सकेर क्यामेरा अफ नगरि श्रीमतिसँग गरेको भिडियो बाहिरिएपछि (भिडियो सहित)
१४ बर्षिया छोरी हराएको सूचना ! छोरी सम्झेर १ सेयर गरिदिनुहोला ! १ सेयर ले छोरी भेटिन सक्छिन !
समाजसेवी तथा राष्ट्रसेवक इन्द्रेणी कार्यक्रमका सञ्चालक कृष्ण कंडेल भए अन्तराष्ट्रिय अवार्डबाट सम्मानित !